तेल चाेर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै हड्ताल, के गर्छ सरकारले ? – www.agnijwala.com
तेल चाेर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै हड्ताल, के गर्छ सरकारले ?
नेपालमा माग र अान्दाेलनकाे कुनै सिमा नै छैन । जसले जे माग राखेर पनि अान्दाेलन गर्ने , जसले जे माग पूरा गराउन पनि बन्द हड्ताल गर्ने ।
इन्धन बोक्ने ट्यांकरहरूले ठाउँठाउँमा पटकपटक हड्ताल गरिरहेका छन्। उनीहरूको घुमाउरो माग छ– तेल चोर्न पाउनुपर्‍यो। ट्यांकर चालकहरूले ‘तेल चोर्न’ माग राखी दुई दिनअघि पनि दिनभरि हड्ताल गरे।
नेपाल आयल निगमले विभिन्न बहानामा हुने इन्धन चुहावट र चोरी नियन्त्रण गर्न लकिङ प्रविधि जडान गरेको छ। यसपछि चालकले तेल चोर्न पाएका थिएनन्। अहिले एक दिनमै करोडौं मूल्यको तेल ‘चोर्न’ पाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेकाे अाज अन्नपूर्णमा समाचार छ ।